Sidee Loo Xannibaa Twitter-ka? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo xiraa Twitter?
Waxaa laga yaabaa 11, 2021 0 comments 381
Markaad gasho Twitter waxaad ku noolaan kartaa khibrad aad u fiican oo madadaalo leh, iyo sidoo kale khibrad aan fiicnayn. Qayb ahaan sababo la xiriira dabeecadaha qaar kale oo isticmaale ah oo laga yaabo inay muujiyaan xiisaha ay u qabaan noloshaada mid aan macquul aheyn, iyadoo ay ugu wacan tahay dabeecadaha sida xoogsheegashada ama xoogsheegashada, iyo sidoo kale dhibaataynta.
Xaaladahan oo kale, Twitter wuxuu diyaar u yahay dadka isticmaala dhibaatadan, suurtagalnimada in laga takhaluso raad kasta oo dadka dhibaya. Nidaamka waxaa loo yaqaan 'blocking' waana mid aad u fudud in la dalbado. Isticmaalayaasha la xanibay awood uma yeelan doonaan inay la xiriiraan nooc kasta oo ka mid ah qofka hor istaagay.
Ma awoodi doonaan inay kuu soo diraan farriimo ama ay galaan Tweets-kaaga, ama wixii ku saabsan wixii aad ku wadaagtay barta Twitter-ka. Sidoo kale ma heli doonaan wax ogeysiin ah inay xannibeen.
Ka jooji Tweets
Laga soo bilaabo Tweets-ka aad ka heli karto khadkaaga waqtigaaga waad ka horjoogsan kartaa isticmaalaha mas'uulka ka ah inuu sameeyo. Si tan loo sameeyo, samee waxyaabaha soo socda:
Meel ku ogow Tweet-ka isticmaalaha aad rabto inaad xannibto. Xagga sare ee Tweet-ka waxaad ka heli doontaa saddex astaamo ellipsis. Riixitaanka astaantan ayaa soo bandhigaysa tab si loo sameeyo ficilada qaarkood.
Waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto midkood "baloog" ku xiga magaca isticmaalaha. Marka aad riixdo qaybtaan, daaqad ayaa soo muuqan doonta iyada oo ikhtiyaar u ah in la joojiyo ama la joojiyo ficilka. Ku sii wad inaad riixdo "qufulka" si aad ugu dambayn u sameyso.
Ka jooji astaamaha
Laga soo bilaabo astaamaha waxaad ku fulin kartaa isla nidaamka xannibaadda, laakiin wadada loo maro waa wax yar oo ka duwan. Raac tallaabooyinka soo socda:
Ka hel Tweet qofka aad rabto inaad xannibo. Ku riix magaca isticmaalaha dusha Tweet-ka. Waxaad sidoo kale ku qori kartaa magaca adeegsadaha barta baaritaanka ee Twitter.
Kadib markaad gasho astaantaada, waxaad kaheleysaa magaca username agtiisa oo leh seddex ellipsis. Markaad riixdo, tab leh dhowr ikhtiyaar ayaa lagusoo bandhigi doonaa. Waa inaad heshaa midka oranaya "block", oo uu weheliyo magaca adeegsadaha astaanta.
Riix xulashadan, ogeysiiska xaqiijinta xannibaadda ayaa soo muuqan doona. Riix "qufulka" oo astaanta ayaa si joogto ah loo xiri doonaa.
Maamul kootooyinka la xanibay
Laga soo bilaabo qaabeynta koontadaada, waxaad awoodi doontaa inaad xaqiijiso xisaabaadka la xanibay oo aad maamusho, haddii ay dhacdo inaad rabto inaad aragti caalami ah ka hesho dhammaan xisaabaadka, haddii aad go'aansato inaad ka sii deyso xannibaadda. Si aad u gasho qaybta xisaabaadka la xanibay, raac dariiqa soo socda:
Ka dib markaad gasho koontadaada, waxaad u baahan doontaa inaad hesho qaybta dejinta ee boggaaga. Tan waxaa laga helaa liiska menu-kaaga waqtigaaga ee websaydhka, halka ay ku yaalliin sawirka astaanta ah ee ka sarreeya khadka waqtiga, ee ku jira codsiga moobilka
App-ka, qaybtaan waxaa lagu magacaabaa dejimaha iyo asturnaanta. Isla marka aad soo gasho ka dib, waa inaad heshaa qaybta "Asturnaanta iyo amniga". Markaad marin u helayso, raadi "aamusnaan iyo xannib."
Qeybtaan waa inaad gashaa "koontooyinka la xiray". Waxaad si otomaatig ah u arki doontaa dhammaan xisaabaadka aad xirtay mar uun ogeysiis "xannibmay" oo guduudan. Adoo riixaya kan dambe, waxaad awoodi doontaa inaad ka saarto qufulka isticmaalaha.
1 Ka jooji Tweets
2 Ka jooji astaamaha
3 Maamul kootooyinka la xanibay
Sidee looga daawan karaa fiidiyowyada Youtube daaqad sabaynaysa?
Sidee loo kala qaadaa fayraska 'Pinterest'?